Alshabaab oo Sadex nin ku toogtay Meel fagaare ah. |
Alshabaab oo Sadex nin ku toogtay Meel fagaare ah.
Xarakadda Ururka Al Shabaab ayaa Sadex nin meel fagaare ah ugu toogtay Magaallada Xeebeedka ee ay sida aadka ah ugu xoogan yihiin ee Degmada Baraawe, ayay xukun qisaas ah ku fuliyeen Sadex nin, ka gadaal markii ay ku eedeeyeen in ay jawaasiis u ahaayeen dhinacyada ka soo horjeeda.
Raggaan ayaa waxaa lagu toogtay Fagaaraha Degmada Baraawe, oo ay isugu soo baxeen boqolaal ruux, markii ay Shabaabaku dadka ugu yeereen in ay Fagaarahaasi isugu soo baxaan si ay u daawadaan raga la tooganayay.
Xaakim u hadlaayay Maxkamada Degmada Baraawe ee Shabaabka, ayaa waxa uu goobtaasi ka akhriyay magacyada raggaan iyo waxa sababay in galabta lagu toogto Faraaha Degmada Baraawe.
Xaakimkaan oo aan magaciisa sheegin, ayaa tilmaamay in raggaan ay qirteen sida uu shegay in ay basaasiin ahaayeen, laakiin majirto wax cadeymo ah oo ay halkaasi ku soo bandhigeen oo aan ka ahayn waxa ay iyaga uun sheegteen
3-da nin ee la toogtay, ayaa waxay Shabaabku magacyadoodu ku kala sheegeen C/majiid Shire Barre oo 25 sano jir ah, Maxamed Deeq Xasan Cali oo 28 sano jir ah iyo Maxamuud Faarax Shire (Shuuriye) oo isna 47 sano jir ahaa.
Sida aan ka war hellnay Shuuriye waxa uu horey kaga tirsanaa Ururka Xisbul Slam, balse markii dambe ku biiray Shabaabka, laba toddobaad kahor, ayaa la sheegay in la xiray, markii uu khilaaf soo kala dhex galay Shabaabka,nimankan markii la tooganaayay waxaa la sheegay in afka looga xiray sharooto.
Dad ehel la ah Shuuriye, ayaa inoo Xaqiijiyay inuuka mid mar noqday Gudoomiyihii Gobolka Hiiraan ee Ururka Xisbul Islaam. Waxa uuna ka soo jeedaa Beesha Xawaadle Cai Madaxweyne.
Xukunkan dilka ah ee lagu fuliyay 3-daan nin, ayaa waxa uu ku soo aadayaa, xilli Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ay qorsheynayaan hawlgal Shabaabka looga saaraayo Degmada Baraawe.
4-tii bishaan, ayay ahayd markii ay Al Shabaab 3 nin ay ku qisaastay Degmada Baraawe, oo middi uu adeer u ahaa Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxamuud “Faroole”.